Backports paGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Mavhiki maviri akapfuura yaiitirwa muguta randinogara Rusununguko Zuva Software.
Panguva yechiitiko, ndakanzwa izwi back port. Ndingadai ndakabvunza ipapo chii chinonzi backport, ndakakomberedzwa nenyanzvi muGNU / Linux, asi ini ndakasiiwa ndisina chokwadi uye, kumba, ndakazvipira kuita ongororo.
Dzimwe nguva ndinofunga isu tinofanirwa kugadzira chikamu chinonzi "Tsananguro dzandinoda muchiSpanish uye ndinozviwana muMandarin Chinese"Nekuda kwetsananguro dzese dzandakawana, hapana chakajekesa zvachose chinhu kwandiri.
Ngatione zvinotaurwa neWikipedia:
Un back port chiito che Gadzirisa o gadzira chigamba kune software ine vhezheni yechinyakare kupfuura iya iripo.
Ehe, chaizvo, ndiwo matauriro andaiita ndichiverenga tsananguro yakajeka.
Naizvozvo, ndakabvunza vaviri "vanopa mazano":) kujekesa nyaya yacho kwandiri. Mhinduro dzandakawana kumubvunzo Chii chinonzi backport? ndeaive anotevera:
[…]… Ivo vanogadzira chigamba uye vanochishandisa kushanduro dzakapfuura zvakare nekuti idambudziko renhaka kana chigamba kubva mushanduro yapfuura, chinoiswa kuchinhu chitsva senge chimiro… […]
Zvakanaka, isu tinogona kutaura ipapo kuti backport chigamba chakagadzirwa kugadzirisa bug mune X vhezheni yepakeji. Mune vhezheni nyowani yepakeji iyi, iyo yekumashure yatove basa rakawanikwa, ndiko kuti: chinhu cheshanduro. Ko zvakadii neshanduro dzekare? Iko kukanganisa kwakabata here? Aihwa: iyo yekumashure, chaizvo, inogadzirisa iyo mhosho. Iko kune, neimwe nzira, a kuwirirana kumashure (unoshamisa uye wakaoma mubvunzo kuti unzwisise kune mumwe munhu, seni, anoshandiswa neimwe nzira kugadzirisa zvikanganiso mushanduro nyowani).
Zvikangodaro, ini zvakare ndakabvunza ReNa (munhu wekare waunoziva pane ino blog), uyo akajekesa mufananidzo zvakati wandei.
[…]… Iko paunoita imwe vhezheni yeOS kupinda mapakeji kubva kune imwe vhezheni, semuenzaniso, kuti uwane yakawanda-in-date vhezheni yeX package.
Zvakawanda zvinoitwa mushanduro dzakagadzikana, saDebian Lenny, ane mapakeji ekare, uye kana iwe uchida chirongwa chitsva chidiki, unogadzira backport kuti uve nacho muDebian Lenny… […]
Ah, saka: Ini ndinonyora chirongwa chitsva pane yekare vhezheni yeOS uye ndizvozvo?
[…]… Haisi kunyatso kuumbiridza, asi kurodha pasi kubva mumabhuku.
Ndokunge, backport inogadzirwa muzvitoro kuti ikwanise kurodha pasi chirongwa chechirongwa icho chitsva… […]
Saka, backports usagadzike bugs chete, Vanondibatsira kushandisa vhezheni itsva (ichidaidza kuti isina kugadzikana, yakagadziridzwa, yakavandudzwa, nezvimwewo) mune yangu yazvino GNU / Linux kugovera. Kugadzira backport, zvinodikanwa here kuti pave nebug kana chimwe chinhu chakadai, kana ndinogona kuitora kuti ive newakagadziridzwa vhezheni, kana ese ari maviri?
[…]… Kwete kwete, unozviita kana uchida, haufanire kusangana nemimwe mamiriro… […]
Mukupedzisa: backports inoita kunge isiri chinhu chakaomesesa, kana imwe worldly. Ivo havaite kunge vanonetsekana kana iwe uchinge waziva kuti chii, ivo?
Ndine chokwadi chekuti panofanira kunge paine backports inozivikanwa, saka kana paine avo vatinoverenga vanoziva chero (kana vakaita backport) ini ndinokukoka kuti utiudze.
Wakanga uriiko backport yako yekupedzisira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Chii icho uye nei ndichida BACKPORT
Inonakidza kwazvo. Kutenda netsananguro, N @ ty. Ndakaverenga iro diki diki rekuti "backport" kakawanda uye ndinogara ndichinetseka kuti chaive chii. Nezvikonzero zveX, ini ndaigara ndichiverengera kutsvaga kwazvinoreva, uye ikozvino tsamba yako yandivhiringidza panhau iyi. Ndatenda!
Ngatione kana ndanzwisisa ... Yekumashure chirevo chigamba chinoburitswa mushanduro dzakapfuura dzechirongwa, asi chichiiswa mushanduro nyowani?
semuenzaniso: iwe unoburitsa chigamba che firefox 3.0, asi muna 3.5 vanoshandisa chigamba chimwe chete kugadzirisa bug?
Tsananguro yakanaka kwazvo, ndinokutendai zvikuru uye sezvo tiri pano ndinokusiyirai N @ ty uye nevasikana vese vhidhiyo inotikurudzira kuti tirambe tichishanda muhunyanzvi, raramai vakadzi vehunyanzvi !!!
Ini ndaishandisa backports kakati wandei kuti ndisvinudze mapakeji kuna Lenny
yakanakisa chinyorwa, uye iyo blog iri chaizvo yakanaka.Ndakabva pane chinyorwa chakasimbiswa nevakomana kubva neoteo uye chokwadi ndechekuti ndakanamatira.
tarisa muenzaniso we backport ndiyo yakasarudzika vhezheni ye puppy linux, inova linux inorarama cd distro yemakomputa ane yakaderera hardware zviwanikwa, ivo vakagadzira yavo huru vhezheni (puppy linux 4.3.1) ine yazvino linux kernel (2.6.31. 2.6.31) , asi kune mamwe macomputer ekare-kare asingafambe zvakanaka ne 2.6.26 kernel saka backport yakaitwa iyo ingave iri vhezheni vhezheni uko yakatsiviwa ne XNUMX kernel asi iyo yese distro zvese zvakafanana software uye yekumisikidza package asi ine yekare kernel kuti ipe kugadzikana uye kuenderana
Pindura kune bhawatakco
Kuti ini ndauya kuzoona kuti chii chinonzi backport makore manomwe mushure mekunge iwe wanyora izvi zvinoshamisa.
Chinyorwa chakanaka. Uye hongu, zano rakareruka rakavhiringidzika.
Yekumashure HAIYO software, chiito pane software kuti iite kuti ishandire mushanduro yapfuura yeiyo OS iyo yaive isina kuitirwa pakutanga.
Semuenzaniso, chigamba. Kana (sekutaura kweWikipedia) iko kushandisa 2.0 kune zvinhu zvekugadzirisa, chigamba chinoitwa. Kana zvikazoitika kuti vhezheni yapfuura (application1.0) yanga iine dambudziko rakafanana asi kodhi yacho yanga yakati siyanei, zvaizodiwa kugadzirisa chigamba, ichigadzira "chiteshi" chechigamba kuti chishande neshanduro yapfuura… "Backport" (yechigamba). Zvakawandisa zvinganzi «chigamba chiri backport».
Izvo zvinoshanda zvakare kana iwe uchida chirongwa chine yakakwira vhezheni nhamba (kupfuura iyo yakagadzikana vhezheni) asi yakagadzirirwa iyo inotevera * vhezheni yeOS yako (IZVI ndizvo zvinozvisiyanisa kubva pakuva chirongwa chekuvandudza uye ndizvozvo).
Kana mumwe munhu aikwanisa kushandura iyo -yazvino-vhezheni vhezheni kuti ishande pane yekare vhezheni yeOS pane zvainge zvakarongwa (zveiyo vhezheni yechirongwa), ivo vaizo "port" chirongwa "kumashure" (zvakare, "backport").